news uptodate – Page 119 – Myanmar Update News
news uptodate | July 10, 2020
ဇွဲကပင်တွင် ထပ်မံပျောက်ဆုံးနေသော ကောင်လေးအား ကယ် ဆယ်ရေး အဖွဲ့များမှ ဒရုန်းဖြင့်ရှာဖွေ တွေ့ရှိ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှ အမျိုးသား (၁) ဦး ခုန်ချမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။”ဒီတခါတော့ ယောက်ျားလေးပါ …စာလဲရေးထားခဲ့ပါတယ် … ဆိုင်ကယ် လွယ်အိတ် သော့တွေ ဖုန်း PW တွေ ချန်ထားခဲ့ပါတယ် ကျားကလေးရွာကလို့ သိရပြီး
မေသန်းနုဟာ သူမကို ချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိနေသေးတာကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် သရုပ်ဆောင် မေသန်းနုကတော့သူမကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ” အနုပညာအလုပ်တွေကိုတော့ အခြေအနေ ပေးရင် ပေးသလို လုပ်သွားမှာပါ။ အခုချိန်မှာလည်း ရှင်းရှင်းပြောရရင် မဆင့်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်၊ ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေပါသေးလား
ဇွဲကပင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုသား ၁ ဦး ထပ်မံ ပျောက်ဆုံးနေ၍ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှ ရှာဖွေနေ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှ အမျိုးသား(၁)ဦး ခုန်ချမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ “ဒီတခါတော့ ယောက်ျားလေးပါ … စာလဲရေးထားခဲ့ပါတယ် … ဆိုင်ကယ် လွယ်အိတ် သော့တွေ ဖုန်း PW တွေ ချန်ထားခဲ့ပါတယ် ကျားကလေးရွာကလို့
ထိုင်ဝမ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၂၀ တန်ဖိုးရှိသော ဒုံးကျည်အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်အား အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သဘောတူ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ထိုင်ဝမ်တွင် မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် Patriot ဒုံးကျည်များ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၂၀ တန်ဖိုးရှိသော ဒုံးကျည် အစိတ်အပိုင်းများ ရောင်းချပေးမည့် အစီအစဉ်ကို သဘောတူလက်ခံခဲ့ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်
on line ပေါ်ကနေ လိမ်စားနေသောသူတွေရဲ့ လိမ်နည်းသစ် တမျိုး (လိမ်ဆင်နောက်တမျိုး) အသိတယောက်ဆီ SMS message ကနေ Wave money ငွေလွှဲ ပုံစံ နဲ့ ဆယ်သိန်း ပို့လိုက်တယ် ဆိုပြီးစာပို့တယ်၊ ပြီးတော့ ဖုန်းဆက်ပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်လို့ ဆယ်သိန်းကံထူးပါတယ်၊ Wave Money ကပါ၊
အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံး “သင်္ဘောသင်္ချိုင်း” ဖြစ်ခဲ့တဲ့ “ကသာ” လူသင်္ချို၊ ကားသင်္ချိုင်း၊ လေယာဉ်သင်္ချိုင်း တွေပဲ ကြားဖူးခဲ့တာ ကသာရောက်မှကို “သင်္ဘောသင်္ချိုင်း” ဆိုတာ ကြားဖူးတာရယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတဲ့။ ခုနေတော့ တခြားနေရာတွေမှာ သင်္ဘောသင်္ချိုင်း တွေရှိနေနိုင်ပေမယ့် အဲ့ခေတ်အဲ့အခါတုန်းကတော့ ကသာက အကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်။ တကယ်တော့ ကသာက မြန်မာပြည်အတွက် ဒုတိယ
မိန်းမကိုမကျေနပ်ရာမှနေအိမ်မီးရှို့မှုဖြစ်ပွား ကျွန်းစုမြို့နယ် မရွှေဦးကျေးရွာတွင် လင်မယား စကားများရာက မီးရှို့မှုဖြစ်ပွ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် ကျွန်းစုမြို့နယ် ကမ်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မရွှေဦးကျေးရွာ၊ အထက်ပိကြပ်ရပ်တွင် ၉. ၇. ၂၀၂၀ နေ့ရက် နံနက်(၇)နာရီချိန်က ကိုအောင်နိုင်သူ (ဘ) ဦးမောင်နိုင် သည်လင်မယားစကားများ စိတ်ဆိုးရာမှ မိမိနေအိမ်အား ဓါတ်ဆီလောင်း၍ မီးရှို့ခဲ့ရာနံနက်( ၈)နာရီ အချိန်တွင်မီးငြိမ်းခဲ့သည်ဟု
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၆ ခုမှ ၈ ခုအထိတည်ဆောက်သွားမည် တရုတ်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၆ ခုမှ ၈ ခုထိ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်စုစုပေါင်းအားကို 70 gigawatts (GW) ထိတိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး
ထိုင်းထီများ မြန်မာပြည်တွင် တရားမဝင်၊ ရောင်းချသူ/ထိုးသူ ထောင်ကျနိုင်တဲ့ ဥပဒေအား ထုတ်ပြန် ယခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်းထီတွေ တော်တော်ခေတ်စားလာပါတယ်။ တစ်စောင်ကို ၆၀၀၀ နဲ့ ရောင်းတဲ့သူကလည်း အားရပါးရရောင်း၊ ထိုးတဲ့သူကလည်း အားရပါးရထိုးနဲ့ အတော်အလုပ်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ထိုင်းထီကလည်း စောင်ရေ ၁ သန်းပဲ ထုတ်ပြီး ၁ လမှာ ၂ ခါ
Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ခေတ္တပိတ်ထားတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီအား စာရင်းပေးသွင်းပြီးမှသာ ဖူးမြော်ခွင့်ပြုမည် ကပ်ရောဂါကြောင့် ခေတ္တပိတ်ထားရတဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီကို ပြန်လည် ဖူးမြော်ခွင့်ပြုပါက လာရောက်ဖူးမြော်သူတွေ အနေနဲ့ စာရင်းပေးသွင်းပြီးမှသာ တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့် ရရှိမယ်လို့ ရွှေတ ဂုံစေတီဂေါပက အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်းဇော်ကပြောပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းတာကိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ တစ်ဆင့်ပေးသွင်းနိုင်သလို စာရင်းမသွင်းဘဲ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖူးမြော်သူ တွေအနေနဲ့လည်း ဘုရားရောက်မှသာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့လည်း
Newer 1 … 117 118 119 120 Older